Cheap Foring akụkụ igwe anaghị agba nchara ụlọ ọrụ na suppliers | Ouzhan
"Red punch" bụ n'ezie usoro ọkụ na-ekpo ọkụ. The igwe anaghị agba nchara uhie ntụmadị ibe ya bụrụ anwụ mkpa iji jiri nchara-bonded sikwuo si carbide. Ike nke ígwè carbide na-eme ka ígwè dị ala dị ala karịa nke carbide na-eme ka mmiri sie ike, na mmetụta ya siri ike dị mma karịa nke carbide simenti. Ọzọkwa, a na-ebu ụzọ rụọ carbide na-eme ka ígwè rụọ ọrụ wee kpochapụ ya.
Igwe anaghị agba nchara uhie ntụmadị ibe ya bụrụ-nkenke igwe anaghị agba nchara ibe ya bụrụ akụkụ na akụkụ
Ngwunye carbide nke a na-ejikọ ọnụ na-abụghị naanị nwere ike dị elu, ike, mana enwere ike ịhazi ya site na ịkpụzi igwe na nhazi ọkụ, ma nwee nnukwu ike nke carbide siri ike (mgbe ọ nwụsịrị na iwe, ọ nwere ike iru (68 ～ 73) HRC, elu na-eyi nguzogide Ya mere, ọ dabara adaba maka ịkpụpụta ebu dị iche iche.Ya mere, n'ihi na carbide na-eme ka simenti na nke a na-ejikọtara ọnụ na-adị oke ọnụ ma nwee oke ike, ọ kwesịrị ekwesị itinye ntinye iji pụta na ebu iji mee ka ndụ ọrụ nke ebu ahụ dịkwuo elu. ma chekwaa Ihe na mbelata ego.N'ihi njirimara nke igwe anaghị agba nchara, ọtụtụ ndị ahịa na-ejikarị igwe anaghị ata akpụ akụkụ, uru ya doro anya.
Uru nke Ouzhan anaghị agba nchara-acha uhie uhie zọọ ibe ya bụrụ akụkụ
- Njirimara Chemical: Nguzogide kemịkal na nkwụsị nke electrochemical bụ nke kachasị mma na nchara, nke abụọ bụ titan alloys.
- Njirimara mekaniki: Dịka ụdị igwe anaghị agba nchara, igwe ọrụ dị iche. Igwe anaghị agba nchara Martensitic nwere nnukwu ike na nkụja, ma dabara adaba maka nrụpụta nsonaazụ na-eguzogide ọgwụ nke chọrọ nnukwu ike na akwa mgbochi na-eyi akwa, dị ka hydraulic turbine shafts na igwe anaghị ata nchara. Knife, igwe anaghị agba nchara biarin, wdg, austenitic anaghị agba nchara nwere ezigbo plasticity, ọ bụghị elu ike ma kacha mma corrosion eguzogide n'etiti igwe anaghị agba nchara. Okwesiri maka oge nke choro iguzogide corrosion ma ihe di ala, dika osisi ogwu na osisi fatịlaịza. Ngwa akụrụngwa nke, sọlfọ sulfuric, ndị na-emepụta hydrochloric acid, wdg, n'ezie, enwere ike iji ya na ụlọ ọrụ ndị agha dịka ndị ụgbọ mmiri okpuru mmiri. Ferritic anaghị agba nchara nwere agafeghị oke n'ibu Njirimara na ala ike, ma ọ bụ na-eguzogide ọgwụ ọxịdashọn na adabara dị iche iche ulo oru oku akụkụ.
- Usoro arụmọrụ: Austenitic anaghị agba nchara nwere arụmọrụ kacha mma. N'ihi plastik ya dị mma, enwere ike ịhazi ya n'ime efere dị iche iche, ọkpọkọ na profaịlụ ndị ọzọ, dabara maka nhazi nrụgide. Igwe anaghị agba nchara Martensitic nwere arụ ọrụ adịghị mma n'ihi oke ike.
- Thedị uhie na-acha uhie uhie anaghị ejedebe site na mpempe mpụga nke akụkụ ngwaahịa n'onwe ya.
OEM ahaziri igwe anaghị agba nchara ọrụ-China Shanghai ibe ya bụrụ akụkụ akụkụ anaghị agba nchara akụkụ emeputa
Ouzhan bụ onye nrụpụta na - agbakwunye ụlọ ọrụ na azụmaahịa, na - enye ọrụ ndozi ntụgharị na igwe nhazi igwe. Dị ka ndị ahịa chọrọ, ọ nwere ike hazie igwe anaghị agba nchara na mụ na a pụrụ ịdabere na elu-nkenke ibe ya bụrụ akụkụ. A na-arụpụta akụkụ igwe ndị a site na iji akụrụngwa kachasị mma, nke a na-enweta site na ndị na-ebubata ngwa ahịa a ma ama. Anyị ike na ọkachamara oru otu na oru oma management na ime ihe na usoro nwere ike hụ na zuru okè n'ichepụta nke igwe anaghị agba nchara ibe ya bụrụ akụkụ. Tụkwasị na nke ahụ, ngwaahịa ndị a na-emepụta nke igwe anaghị agba nchara na-agbaso ụkpụrụ dị elu ma nwee ike iji ya rụọ ọrụ dị iche iche. Na anyị nwere ike inye asọmpi anaghị agba nchara CNC ibe ya bụrụ akụkụ price ọrụ anyị dị oké ọnụ ahịa.
Ojiji nke igwe anaghị agba nchara uhie zọọ ibe ya bụrụ akụkụ
N'ihi na igwe anaghị agba nchara akụkụ mkpa uka mmepụta, red ntụmadị ibe ya bụrụ na-eji uka mepụtara, na-azọpụta mmepụta okirikiri na-eri.
Gịnị bụ ojiji nke igwe anaghị agba nchara ibe ya bụrụ akụkụ
304 igwe anaghị agba nchara oge ọgbụgba na-ọtụtụ-eji na-ewu ihe ngwaike na kwa ụbọchị ngwaike, ma na ajọ corrosive ọrụ ma ọ bụ mmiri ikuku, ọ kasị mma iji 316 igwe anaghị agba nchara.
N'ihi na obere akụkụ na elu chọrọ, uhie ntụmadị ibe ya bụrụ nwere ike iji maka uka mmepụta, nke kwesịrị ekwesị maka n'ibu akụrụngwa na-adị kwa ụbọchị mkpa na obere akụkụ.
Uru nke igwe anaghị agba nchara ibe ya bụrụ ọrụ
- All nkenke ibe ya bụrụ akụkụ anaghị agba nchara ngwaahịa bụ isiokwu nlezianya mma nnyocha.
- Dịka eserese ma ọ bụ ihe nlele si rụpụta nkenke igwe anaghị agba nchara.
Nke gara aga: Ahaziri carbon ígwè esorowo akụkụ
Osote: Ahaziri igwe anaghị agba nchara esorowo akụkụ n'ibu akụkụ